तपाईको साथिले यौनसम्पर्क गर्न मानेन भने यसरी सजिलैं मनाउँनुहोस ! « Deshko News
तपाईको साथिले यौनसम्पर्क गर्न मानेन भने यसरी सजिलैं मनाउँनुहोस !
यौन जीवन रोमान्टिक बनाउनको लागी, तपाईले धेरै गर्नुपर्छ । धेरै पटक तपाईंको जीवन यस्तो हुन्छ कि तपाईंको साझेदारले यौनसम्पर्क राख्न इन्कार गर्दछ वा लाज मान्ने गर्दछ । यौनको लागि सहमत नहुने थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्, जुन कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । तर के हुन्छ जब तपाई थाहा पाउँनुहुन्छ कि तपाईंको साथि तपाईसँग खुःशी छैन । तपाईसँग तपाईको यौन साथिले यौनसम्पर्क गर्न मान्दैन तब तपाई के गर्नुहुन्छ ? आज हामी यस बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं ।
सामान्यतया जब तपाई आफ्नो केटी साथिलाई सम्बन्ध राख्नको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ । यदी उ तपाईसँग खुःशी छैन भने उसमा जलन, टाउखो दुख्ने रिस, तनाव, यस्तो भावना उत्पन्न हुन सक्छ, त्यसपछि तपाईले त्यस भावनालाई हटाउन प्रयास गर्नुहोस् । आफ्नो रोमान्स र तपाईंको मायालुलाई खुसी राख्नुहोस् । आउँनुहोस यौन जीवनको आन्नद कसरी लिन सकिन्छ जानौं…
सुत्ने कोठमा उज्यालो बत्तिः यौन विशेषज्ञकाअनुसार एकअर्काको शरीर मालिश गर्ने गर्नाले यसको माध्यमबाट, रोमान्सको भावनाहरू बढाउन सकिन्छ । बेडरूममा उज्यालो बत्ति सम्भव हुन्छ भने तपाईले मैन बत्ति बाल्नु राम्रो मानिन्छ । आफ्नो साथिको शरिरलाई मालिस गर्दै समधुर संगीत पनि बजाउँने गर्नुहोस् । यसो गर्नाले तपाईको साथिलाई यौनइच्छा पैदा हुनसक्छ र तपाईले यौन आन्नद लिन सक्नुहुन्छ वा दिनसक्नुहुन्छ ।